Qupzilla 1.4.0 dia misy amin'ny fanatsarana maro | Avy amin'ny Linux
Qupzilla 1.4.0 dia misy fanatsarana maro
De Qupzilla ya efa niresaka izahay en Avy amin'ny Linux ary androany sendra mandeha mandeha manodidina ny tranokalanao aho, dia hitako fa ilay 1.4.0 version aorian'ny fampandrosoana 6 volana.
Fotoana be dia be teo anelanelan'ny kinova no nandoa, satria ny fanovana sy ny fanatsarana dia nifandraika tamin'izay Qupzilla 1.3.x. Araka ny hitanao amin'ny sary izay manomboka ity lahatsoratra ity, ankehitriny isika dia afaka mametraka ny takelaka eo an-tampony ary ny menio natambatra dia nisy fanatsarana vitsivitsy, anisan'izany ny fisehoana ao anatin'ny varavarankelin'ny Qupzilla.
Ny fanovana hafa dia:
Ny anaran'ny sehatra dia misongadina ao amin'ny bara URL.
Azo atambatra amin'ny alàlan'ny Qt5 izy io.
Webkit 2.3 miaraka amina fiasa vaovao.
Nanampy fanohanana amin'ny famonjena tenimiafina ho an'ny mpampiasa maro isaky ny tranokala.
Fahaizana mifantina lahatsoratra amin'ny tranokala misy Shift + Arrows.
Manontany ny mpampiasa raha te hampiasa fampandrenesana geolocation amin'ny tranokala izy ireo.
Fikarohana motera fikarohana.
Safidy hampiatoana ireo sosokevitra ao amin'ny bara fikarohana.
Ny fampirimana fampirimana dia nafindra ho ~ / .config / qupzilla.
Mitahiry fahatsiarovana hatramin'ny 30Mb ianao rehefa mampiasa Adblock.
Ny vahaolana am-baravarankely feno amin'ny Xfce dia voavaha.
ary maro hafa koa .. Lisitry ny fanovana feno.
Sintomy ny Qupzilla 1.4.0
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Qupzilla 1.4.0 dia misy fanatsarana maro
Ny marina dia QupZilla .. ..dia manomboka (ao an-tsaiko) ho safidy lehibe eo amin'ireo mpizaha tena lehibe ..
Ary miaraka amin'ity taham-pivoarana sy zanabola tsara ity ... mety hahomby izy ireo ...
Ary vonona !! 🙂
Tsara daholo avy any qupzilla
Inona no napetrakao ao amin'ny UserAgent?
amin'ny alàlan'ny default, tonga ny mpampiasa ny chrome 16
Miaraka amin'ny olana vitsivitsy noho ny fiteny dia ny Espaniôla avy any Espana sy Venezoela ihany no ekeny fa tsy ny zava-drehetra dia voadika 100%, ny fandefasana ireo ankafiziko dia mihamangatsiaka hatrany amin'ny 96% (voatery nametraka azy ireo tsy an-tserasera aho) satria mitady ny kisary Ary ity kinova ity dia tsy haingana toy ny teo aloha ary ny manitsy ny pejiko dia tsy mandeha izy io satria milaza fa tsy manohana an'i WYSIGYW io.
Ho famaranana dia efa tadidiko satria tsy nametraka azy io aho.
Venezoela Hery 😀 haha, qupzilla dia ho iray amin'ireo mpijery tsara indrindra, saingy amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny kinova fampandrosoana na dia azo ampiasaina aza.
Tsy hoe nisy fahasamihafana be! xD, tsy hitako ny fitarainana anglisy satria 90% amin'ireo zavatra ireo dia amin'ny teny anglisy amerikana xD
Nampiasako azy io nandritra ny fotoana kelikely, saingy tsy nety tamiko io. Tiako kokoa io izao. Gaga aho izao fa mahatsapa firefox 19 tsara amin'ny PCLinuxOS-ko.
Masinina Webkit iray hahafehy azy rehetra.
Nijanona tao amin'ny Firefox aho.
Mampiasa Gnome aho, saingy napetrako sy notsapaiko izany satria matetika aho mampiasa desktops amin'ny vanim-potoana, androany aho ao anaty gnome ary afaka 1 taona na latsaka dia miova ho any amin'ny KDE aho ary ny mifamadika amin'izany, ary amin'ny zavatra iray raha hitako fa diso ny KDE dia izy ireo amin'ny mpizaha dia manandrana mampiasa ny qt rehetra aho fa ny hany mpitety mahomby ho an'ny KDE dia ny Opera ary fananana izy io, na dia mpizaha tena tsara aza.
Nisy zavatra toy ny herintaona sy sasany lasa izay raha nampiasa arkanjely aho, dia nanapa-kevitra hizaha raha azo atao ny manana birao somary feno amin'ny alàlan'ny qt fotsiny (tsy misy tranomboky kde). Amin'izao fotoana izao dia tsy azo atao. Tsy nahita mpizaha tranonkala aho (nilaozana i arora), tsy tontonana tsara na mpamaky pdf ary fampiharana hafa marobe. Androany dia niova ho tsara kokoa. Qupzilla dia ohatra tsara amin'ity 🙂
Fitsapana ny kinova Qupzilla vaovao…. mora ihany koa ny manova ny UserAgent avy amin'ny menio fikirakira azy.
Ahoana ny fomba famoronana photomosaics mahavariana amin'ny Metapixel